WOWOW Faucet fandroana mainty Centerset mainty 2 mitantana fantsom-bozaka 4 mirefy fantsom-batana miakatra sy fantsom-panafody
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana afovoan'ny Centerset / WOWOW Faucet fandroana mainty Centerset mainty 2 mitantana fantsom-bozaka 4 mirefy fantsom-batana miakatra sy fantsom-panafody
Faucet fandroana fandroana avo roa heny: Fitaovana fandroana 4 mirefy misy famolavolana tahony roa, izay manamora ny fanitsiana ny rano sy ny mari-pana! Ny spout arc lehibe dia manome anao fahazoan-dàlana betsaka eo ambanin'ny spout.
Easy fametrahana: Ny faucet amin'ny fandroana mainty dia miaraka amina fantsom-pamatarana tehina sy fonon-tànana roa. Ivontoerana 4-inch sy famolavolana mount hole 3 dia mamela fametrahana mora foana.
Faucet fandroana maoderina: Matte mainty ambonin'ny tany, ary ny famolavolana lamaody mahazatra, azo antoka ny faharetan'ny faucet ao an-trano fandroana, tsy harafesina, tsy harafesina, fanoherana.
Kalitao avo lenta amin'ny vidiny: Tongotra varahina miantoka ny faharetana sy ny fiankinan-doha; Vita amin'ny sakafo kilasy BASF, miaro anao sy ny fahasalaman'ny fianakavianao. Ny spout faucet lavatory vita amin'ny aerator ABS dia afaka manampy anao hitahiry rano. (Ity aerator ity dia azo alaina mivantana amin'ny tananao mba hanadio)
Serivisy ho an'ny mpanjifa: Fiantohana 5 taona voafetra sy fanampiana ny mpanjifa no atolotra. Rakotra fiverenana 90 andro izy io. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
High Arc 4 Inch Centerset Vanity Faucet Mainty
Faucet amin'ny fandroana WOWOW - Ataovy mora kokoa ny fiainanao!
Mainty, tsy mety maty kilalao, ary io no fironana izay tsy mihemotra na oviana na oviana. faucet amin'ny fandroana misy faritra mainty, atambatra amin'ny tatatra mainty, maoderina sy kanto kokoa
Famolavolana fihodinana 360 degre ho an'ny fampiasana mety
Natao ho an'ny fametrahana 3 Lava 4 Inch Centerset
Tonga miaraka amina tsipika famatsian-drano cUPC 60cm
Amboary ny faucet dia ho mahafinaritra ny fandroanao!
Rindrambaiko maoderina roa mitantana
Fahaovana 360 fihodinana
Volavola avo lenta
Famolavolana fikirakirana avo roa heny mba hifehezana tsara ny haavon'ny rano sy ny maripana.
Faucet kalitao premium
Made of BASF Sakafo ara-tsakafo
NSF / ANSI 61 (Vokatry ny fahasalaman'ny rano fisotro)
Arovy ny fahasalaman'ny fianakavianao
Mpitohy varahina matevina
Mifanaraka amin'ny lavaka telo, fametrahana 4-inch
Noza ABS avo lenta
Azo esorina amin'ny fanadiovana tsy misy fitaovana
Faucet amin'ny fandroana misy tatatra
Tsy mila mikasika ny takona rehefa manasa tanana amin'ny tehina fanindriana ao aorian'ny fantsona. Mba hanomezana anao fiainana mety sy milamina.
Izay ao anaty boaty
1 x centre fantsona fandroana mainty
1 Andiana kojakoja ilaina
1 x Asandrato ny tsorakazo
Fantsona rano 1x 60 sm CUPC
SKU: 2321100B Sokajy: Faucets fandroana afovoan'ny Centerset, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: 3-lavaka, afovoan'ny santimetatra
12.13 x 8.78 x 3.27 santimetatra
WOWOW Menaka Fandroana Fandroana Fandroana Fandroana Fandroana Solika 2 -...